Home Wararka Waxa geeriyooday C/casis Sh. X. Dayib oo ahaa Hanti Dhowrahii Guud ee...
Waxa geeriyooday C/casis Sh. X. Dayib oo ahaa Hanti Dhowrahii Guud ee Jubaland
Allaha u naxariistee waxaa geeriyooday Hanti Dhowrahii Guud ee Dowlada Jubaland Marxuum Cabdicasiis Sheekh Xuseen Dayib oo ku geeriyooday Magaalada Nairobi ee Dalka Kenya oo maalmahii lasoo dhaafay uu ku xanuunsanayay. Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Jubbaland Mudane Axmed Maxamed Islaam, ayaa isagoo ku hadlaya Magaciisa, iyo kan Goleyaasha kala duwan ee Dowlada waxaa uu Shacabka Soomaaliyeed, Bulshada Jubaland, qaraabadii, qoyskii iyo Saxiibadii uu ka baxay uga Tacsiyeeyay Geeridii ku timid Marxuun C/Casiis Sh Dayib.
“ Marxuum Cabdicasiis wuxuu kamid ahaa aas aasayaashii Dowlada Jubaland isagoo mar walba ay ku weynayd sidii dadka Soomaaliyeed ay nabad iyo walaalnimo ugu wada noolaan lahayeen wuxuuna ka soo shaqeeyay qeybo kala duwan isagoo wakhti iyo naf huris u muujiyay wakhtiyo adag oo bulshadu ay u baahnayd.” Ayuu yiri Madaxweynahu. Ugu danbayn Madaxweynahu wuxuu Alle “SWC” uga baryay marxuumka inuu u danbi dhaafo naxariistii janana rabi uu ka waraabiyo.